विराटनगरमा डेंगु संक्रमण बढ्दो, लापरवाही गरेमा ज्यानसमेत जान सक्ने !
पछिल्लो केही दिनयता विराटनगर महानगरपालिकाका केही क्षेत्रमा डेंगु संक्रमण फैलिएको छ । विराटनगर महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार विराटनगरमा हालसम्म २२ जनामा डेंगु फेला परेको छ ।
एक्कासी डेंगु संक्रमण फैलिएपछि मानिसहरु डराएका छन् । महानगरपालिकाले पनि यसलाई निवारण गर्नका लागि अनेकौँ उपायहरु आपनाइरहेको छ । डेंगु लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक संक्रामक रोग हो । डेंगु एडिस एजेप्टाई र एडिस अल्बोपिक्टस नामका पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्छ ।
नेपालका विभिन्न ठाउँहरुमा यसअघि धेरै मात्रामा एडिस एजेप्टाई लामखुट्टे, यसका लार्भा र प्युपा फेला परेका छन् । यो रोग सार्ने लामखुट्टे ग्रामीण क्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी पाइने गर्दछ । डेंगु रोग पछिल्लो समय नेपालका धेरै जिल्लाहरुमा अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै गएको छ । एडिस जातको पोथी लामखुट्टेले सफा पानी जमेका स्थानमा फूल पार्ने गर्छ । महानगरपालिकाले जमेको पानीमा डेंगु छ वा छैन भनेर पहिचान गर्दै डेंगुको लार्भा नष्ट गर्न थालिएको छ ।
स्वास्थ्य शाखाका सि. अहेब अधिकृत सुवास नेपाल
स्वास्थ्य शाखाका सि. अहेब अधिकृत सुवास नेपालले डेंगुबाट बच्नका लागि केही सुझाव दिएका छन् ।
विराटनगर को कुन कुन वार्डमा धेरै मानिसहरु प्रभावित छन् ?
विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १, ३, ४, ५, ६, ७, १२ मा बढी समस्या फेला परेको छ ।
बिरामीहरु धेरै जसो कुन समुदायका थिए ?
कुन समुदायका भन्ने नै थिएनन् । स्वस्थकर्मी तथा नर्सहरुमा पनि देखिनुका साथै एउटै घरका ३ जनालाई समेत संक्रमण भएको छ ।
डेंगु नियन्त्रणका लागि महानगरपालिका के के गरिरहेको छ ?
डेंगु नियन्त्रणका लागि दुइटा रणनीति अपनाइएको छ । लामखुट्टेबाट सर्ने भएका कारणले विराटनगरका १९ वटै वार्डमा स्प्रे गर्नुका साथै ‘लामखुट्टे खोज र नष्ट गर’ अभियान चलाइएको थियो । यसमा डेंगुको लार्भा खोजेर नष्ट गर्नुका साथै त्यस ठाउँमा डेंगुको लार्भालाई कसरी मार्ने र यसबाट कसरी बच्ने भनेर जनचेतना पनि फैलाएका छौं ।
डेंगुको संक्रमण रोक्न के गर्ने ?
पानी जमेको ठाउँमा मट्टीतेल, मोबिल हाल्ने, पानी जमेको ठाउँलाई सफा गरिरहने, घर तथा बाटोमा सरसफाइ गर्ने, लामखुट्टे छिर्न नदिनका लागि घरका झ्याल ढोकामा जाली लगाउनु पर्ने, खाल्डा खुल्डी पुर्नुका साथै एक्लै नगरपालिकाको प्रयासले मात्र नहुने भएकाले डेंगु नियन्त्रणका लागि जनताहरुले पनि मद्दत गर्नु पर्छ ।
हामीलाई डेंगु नलागोस् भनेर हामीले चै के गर्ने ?
डेंगु सफा पानीमा पाइने हुँदा गमला, घरको छेउछाउ खाल्डाखुल्डी, फालिएका भाँडाकुडा, रुखका टोड्का, खाली बट्टा, खाली ड्रमहरू, एसी, कुलर तथा फ्रिजको पछाडी पानी जम्न नदिने, घर वरिपरि सफा राख्ने, पानी धेरबेरसम्म जमेको ठाउँमा मट्टीतेल तथा मोबिल हाल्ने, सुत्दा सधैँ झुलको प्रयोग गर्ने । यो लामखुट्टेले दिउँसो मात्र टोक्ने हुँदा दिउँसो बस्दा, बारीमा काम गर्दा फुल बाहुला भएको वा शरीर ढाकिने लुगा लगाउने, जुत्ता लगाएर काम गर्ने गर्नु पर्छ । एकदमै छिटो रोग फैलाउने भएकाले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नका लागि बजारमा पाइने लामखुट्टे भगाउने मल्हम लगाउने गर्दा डेंगु हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
डेंगु हुँदा कस्तो खाना खाने गर्नु पर्छ ?
दिनको ५ देखि ६ चोटीसम्म पौष्टिक युक्त खानेकुरा खाने, यो त्यो नखाने भने नहुने भएकोले बार्नु पर्दैन, पानी धेरै पिउने, धेरै तरल पदार्थ भएको खानेकुरा जस्तै दालको रस, सुप, हाम्रो घरमा जे छ त्यहि खाने गर्नु पर्छ ।
डेंगु हुदा चिँया कफी पिउदा हुन्छ ?
मज्जाले हुन्छ, त्यस्तो केहि पनि बार्नु पर्दैन ।
डेंगुका लक्षण के कस्ता हुन्छन् ?
डेंगु ज्वरो अर्थात् डेंगु फिभरको मुख्य लक्षण भनेको एक्कासी उच्च ज्वरो आउनु हो । यो ज्वरो ५ देखि ७ दिनसम्म रहन सक्छ । ज्वरोका साथै असाध्यै टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, पेट दुख्ने, आँखाको गेडीहरु असाध्यै दुख्ने, ढाड, जोर्नी तथा मांसपेसी दुख्ने, नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने, शरीरमा रगत जमेको दागहरू देखापर्ने तथा बेहोस् हुने जस्ता लक्षणहरू देखा परे डेंगु हुन सक्छ ।
डेंगुको लक्षण देखा परे के गर्ने ?
लक्षण देखा परे अस्पताल जाने तर, अस्पताल जाने बित्तिकै डेंगु परीक्षण गर्ने भने होइन । डाक्टरको सल्लाहअनुसार रगतको रुटिन जाँच हुन्छ त्यो गर्ने, जाँच पछि रगतमा प्लेतिलेट्स भन्नेको मात्रा बढेको छ भने डेंगुको किट प्रयोग गरेर डेंगु छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने गरिन्छ ।
डेंगुका कारण मृत्यु हुने को संख्या ?
हालसम्म मोरङ जिल्लामा संक्रमण देखिएका कसैको पनि मृत्यु भएको रेकर्ड छैन र सस्थति नियन्त्रणमा नै रहेको छ । जोरोलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेमा, रक्तश्राव भएको खण्डमा बिरामीको ज्यान पनि जान सक्छ । भाइरल भएका कारण उपचारमा कठिन हुने भए पनि पौष्टिक खाना खाएर डाक्टरको सल्लाहअनुसार औषधिको सेवन गरेमा ७ देखि १० दिनसम्म डेंगु नियन्त्रणमा आउन सक्छ । लापरवाही गरेमा रोग झन् बल्झेर मृत्युसमेत हुन सक्छ ।